Ebube Ogologo - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ebube Ogologo)
Na ìhè 3900 nke ìhè na akara 5000K, anyị Post Top Light ga-enye gị ọtụtụ ìhè! Nke a 30w na-acha ọkụ ọkụ na-agbanye 100W MH HPS HID ìhè. Ma chekwaa ruo 88% na ọnụọgụ ọkụ nke oghere ụlọ ọrụ gị. Bbier 30w Post Top Light Fitting bụ ETL na DLC kwadoro maka top-notch àgwà na arụmọrụ. Onye na- acha ọkụ anyị Post Top Lights...
N'ịbụ nke a na-azụ site na 19500 lumens, anyị High Bay Led Light 150W na ihe mmetụta sensọ na-emepụta oghere nke 120 Celsius na-ekpuchikwu ohere na CRI dị elu ma na-eme ka ọ ghọtakwuo, ka ìhè ndị enyi na-eme ka ibelata ìhè. N'inye ihe ruru awa 50,000, anyị na-enye ìhè dị mma na High Bay Led Light Fixtures...
100W Na-aga n'Ugwu Yard Light Photocell
Ogologo Ugwu Ugwu anyị bia na ma ọ bụ ihe nkedo a na-edozi ma ọ bụ ihe nkedo aka nke aka na-ejikọta n'akụkụ aka nke osisi ahụ. Mfe ngwa ngwa dochie ihe ọ bụla metal halides / HPS / HID ntanye ma gbanwee ìhè ìhè. A na-enwerịta ihe ndị ọzọ na-adagharị, ogwe aka aka, na yoke / swivel kits dị maka ugwu Led Yard Light...
25W Anyanwụ na-akwado n'èzí na-ekpuchi Post Elu
Nke a bụ 25w Post Top Light Lights ka edere n'elu ogwe osisi dị gburugburu. Eluigwe na-enwu enwu na-enwu gbaa bụ ihe dị mma maka onye ọ bụla chọrọ iji dochie mmanụ ma ọ bụ ọkụ eletrik ma ọ bụ maka nrụnye ọhụrụ. Nke a pụrụ iche Mpịgharị Njikere Mbara ejiri ya na SMD LED nke nyere 3750 Lumens na njuputa zuru ezu....
Ogologo ihe omuma nke ubochi na-ekpuchi 150W
The High Bay Garage Lights 150W bụ 130lm / w na 19500 lumens. Anyị High Bay Fixture jikọrọ 150W nwere ike dochie 400W HPS MH HID. Ebube echichi maka nke a bụ High Bay Explosion Proof Lighting bụ 5-7m. Nke a dị elu nke ihe nkedo dị elu bụ EC ROHS ETL DLC. The elu n'ọnụ mmiri fluorescent ọkụ na-eji maka nkwakọba,...
Ogologo Uzo Ahuhu Uzo Ogugu 150W
Ogologo Uzo Ahuhu Uzo Ogugu 150W 1. 15 0W na- eduzi Post Top ìhè Ịkụkwa ike, na gburugburu ebe obibi, Ọ dịghị UV ma ọ bụ IR radiation. 2. na- ebute ebe dị elu 150W Ugbochi, mgbochi mmiri, enweghị ncha, ọ dịghị ihe mgbochi, na-echebe anya gị. 3. 150W post ìhè mpaghara Elu ike na kwụsie ike, ọ dịghị ụgwọ ọrụ. 4. Ogwe...
Ogologo oge arụ ọrụ na-arụ ọrụ 150W
Ogologo oge arụ ọrụ na-arụ ọrụ 150W Mmiri a dị elu na-eduba ìhè ọrụ bụ ngwụcha zuru oke maka oriọna ọkụ 300W, na-echekwa ruo 80% na ụgwọ ọkụ eletrik gị. Egwuregwu ọrụ ọrụ 150W anyị nwere ike ijikọta ya na ntinye nkwụnye na ụdọ ike jikọtara ya na plọg, na-ahapụ gị ka ị jikọọ na ọtụtụ ọkụ na-echekwa plọg. IP65...
Okpukpu Uzo Ogologo 80W 250W HID Replacement
Anyị 80W zoro Dugara Nnọchi enyere gị aka belata ihe karịrị pasent 90 nke ọkụ eletrik site na dochie nke 250W gị. Nke a 80w Led Retrofit Lamp nwere awa 50,000 na-adị ogologo ma na-adịkwa mma mma na ndụ ndụ. Mgbapụta Ntuchi nwere ike ijere gị ozi ruo afọ 20 iji awa ise jiri kwa ụbọchị. Nke a na-emeri nnwale nke 80p...
Ebube Ogologo Egoro 80W Ebube Ogologo Oge Ebube Ogige Ubi Ebube Ufo Ebube Ufo elu Ugwu Ugwu Ogologo Udo Ogologo Oge Ebube Ochie Post